प्रतिष्ठान निषेधित क्षेत्र कायमैः केसीलाई ४ खतराको संकेत
‘डा. केसी अनशनकारी हैनन्,बिरामी हुन्’– प्रजिअ पौडेल
निर्माण सञ्चार, कर्णाली प्रदेश | जुम्लामा ११ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई स्थानीय प्रशासनले अनशनकारी नभई ‘सिकिस्त बिरामी’ भनेको छ ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएका डा. केसीले त्यहिँबाट आफ्नो अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
यता स्थानीय प्रशासनले भने उनलाई बिरामी भएर प्रतिष्ठानमा उपचार गराइहेको बताएको छ ।
‘उनकोे स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले भने, ‘प्रशासनको नजरमा उहाँ मात्र बिरामी हुन् अनसनकारी होईनन् । ’
अनशनको पाचौँ दिन अत्याधिक छाती दुखेपछि सिकिस्त अवस्थामा जीवन रक्षाका लागि उपचार गर्न विरामीका रुपमा डा. केसीलाई प्रतिष्ठान लगिएको हो ।
प्रजिअ पौडेलले भने, ‘अहिले पनि उपचार भइरहेको छ’ प्रशासनले डा. केसीको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न चिकित्सकलाई निर्देशन पनि दिएका छ ।’
सुरुमा खलंगास्थित कवर्ड हलमा अनशन बसेका डा. केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि ५ औँ दिनमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको थियो ।
डा. केसीले सुरुमै प्रतिष्ठानमै अनशन बस्ने इच्छा गरेका भए पनि प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेर रोक लगाएको थियो ।
‘प्रजिअ पौडेलका अनुसार हाल प्रतिष्ठान अनशन निषेधित क्षेत्र कायमै छ, एक बिरामीको ज्यान बचाउनु हाम्रो दायित्व हो, डा. केसीलाई काठमाडौं पठाउने योजना प्रशासनले बनाए पनि उनले मानेका छैनन्’, प्रजिअ पौडेलले भने ।
डाक्टर केसी गलत ठाउँमा आएर अनशन बसेको उनको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानलाई अनशनस्थलमा रुपमा नलिन प्रजिअ पौडेलको आग्रह छ ।
प्रतिष्ठान निषेधित क्षेत्र कायमै
डाक्टर गोविन्द केसी असार १६ गतेबाट जुम्लामा अनशनरत छन् ।
उनको स्वास्थ्य अबस्था निकै जटिल बन्दै गएको छ । असार १६ गते स्वास्थ्य परिक्षणका लागि प्रतिष्ठान जान खोज्दा डा. केसीलाई १ किलोमिटर टाढै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
त्यस लगत्तै सरकारले प्रतिष्ठान र प्रशासनको २ सय मिटर क्षेत्रलाई अनशनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
जसका कारण डाक्टर केसीले प्रहरी नियन्त्रणकै बीच अव्यवस्थित कवर्डहलमै अनशन सुरु गरेका थिए । अनशनको पाचौँ दिनसम्म आएपछि डा. केसीको स्वासथ्यमा समस्या देखिएपछि प्रतिष्ठान लगिएको हो ।
राज्य पक्ष कमजोर भएको रहेको भन्ने भ्रम सबैले तोड्नु प्रजिअको आग्रह छ ।
बिरामीका रुपमा डा. केसीलाई उपचार गर्न प्रतिष्ठान लगिएको हो । तर, अनशनकारीका रुपमा लिन नमिल्ने सरकारी पक्षको दाबी छ ।
केसीलाई हुनसक्ने चार खतरा
अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मुटुको चाल अस्थिर हुदै गएपछि मूख्य चार समस्याको जोखिम देखिएको उपचारमा संंगल्न चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
एक्कासी मुटुको चाल अस्थिर बन्दै गएको छ । आबश्यक उपचारका लागि एअरलिफ्ट मार्फत बाहिर लिन जरुरी छ ।
डा. केसीले माग पुरा नहुन्जेल नर्फकने भनेता पनि जीवन रक्षाका लागि भएपनि सरकारले चाडै सोच्नुपर्ने डाक्टर प्रविण गिरीले बताए । निमोनिया, मस्तिष्कघात, हृदयघात र हृदयको गती बन्द हुने चार खतरा केसीलाई जतिबेला पनि हुनसक्ने उपचारमा संगल्न डा गिरीले बताए । अत्याआबश्यक औषधी पनि खान नमान्दा समस्या भईरहेको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
अबको १/२ दिनमा केसीलाई एअरलिफ्ट नगरे केही भन्न नमिल्ने चिकित्सकहरुको दाबी छ ।
‘रगतमा म्याग्नेसियमको मात्रा धेरै कम छ’ डाक्टर पुजन धिरज गुरुङले भने, ‘जसले गर्दा मुटुको चाल बन्द गर्ने सम्भवना हुन्छ ।’
यदि यसै क्रम जारी रहेमा चार खतरा मध्य निचिश्त रुपमा एक खतरा केसीलाई हुनसक्ने समेत डाक्टर गुरुङले बताए ।
केन्द्रका चिकित्सकको होटलमै बास
जुम्लामा दश दिनयता अनशनरत डा. गोविन्द केसीको उपचारका लागि खटाईएका सरकारी चिकित्सक होटलमै बास बस्न बाध्य भएका छन् ।
गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. केसीको उपचारका लागि जुम्ला खटाएका दुईजना विशषेज्ञ चिकित्सकबाट केसीले उपचार गराउन अस्वीकार गरेपछि उनिहरु जुम्लाको एक होटलमै बस्न बाध्य रहेका छन् ।
गत शनिबारदेखि अनशनमा बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था विग्रदै गएपछि उनको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँस्थित वीर अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरु जीवन थापा र सुवाश रेग्मीलाई जुम्ला खटाएको थियो ।
उनिहरुबाट डा. केसीले उपचार लिन अस्विकार गरेपछि उनीहरु मानसरोवर होटलमा बसीरहेका छन् । तर, ती डाक्टरहरुले केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अप्रत्यक्ष निगरानी गर्नुका साथै सरसल्लाह दिईरहेको बताउछन् ।
‘हामि केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ, सरसल्लाहका आधारमा केसीको उपचार भैरहेको छ’ विशषेज्ञ चिकित्सक जीवन थापाले भने, ‘हामी केसीको स्वास्थ्यप्रति निकै चिन्ताजनक छौँ, केसीको माग सम्बोधन हुँदै जाला, तर पहिलो कर्तव्य जिवनरक्षा गर्नु हो ।’
एक दुई दिनमै केसीको स्वास्थ्यमा अँझै जोखिमपुर्ण समस्या आउन सक्ने होटलमै बसेका अर्का विशषेज्ञ चिकित्सक सुवाश रेग्मीले बताए ।
‘हामीलाई सरकारले खटाएको हो, हामी केसी जुम्लामै रहुन्जेल यतै बस्छौ’ उनले भने, ‘तर अप्ठ्यारो परिस्थीति आँउदा हामीले पनि केसीको जिबनरक्षा गर्नसक्ने अवस्था हुने छैन ।’
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवाश्यक उपकरण सहित आईसियुको व्यवस्था नभएकाले जोखिम अवस्थामा केसीलाई बचाउन नसकिने उनिहरुको भनाई छ ।
मौसम पनि बिग्रदै गएकाले जटिल अवस्थामा डा. केसीको उद्धार गर्न ढिलाई हुने चिकित्सकको अनुमान छ ।
मंगलबार २६ असार ०७५